By MOHAMED BEERDHIGE 01/12/2012Madaxweynaha Dawlada Ku Meek Gaarka (DKMG) iyo wafdi sare oo uu hogaaminayo oo booqday xeryaha dadka barakacay ee Muqdishu.
Madaxweyaha intaa ku sii daray in abuuray unug gaar ah oo ilaaliya xeryaha barakacayaasha kadib markii kufsiga iyo dhacu soo bateen labadii bilood ee ugu danbeeyey. Aadam Cali oo 63 jir ah oo degan xerada Badbaado ayaa ku farxay booqashada madaxweynaha oo mustaqbalkooda u tafatiray.
Tobanaan kun oo barakacayaal ah ayaa Muqdishu usoo kacay sanadkii lasoo dhaafay iyagoo kasoo cararay abaar iyo fallaagada al-Shabaab. Xerada Badbaado ee barakacayaasha eek u taal degmada Dharkenley ee Muqdisho oo xerada ugu weyn ee caasimada ayna ku sugaan yihiin in kor udhaaftay 40,000 barakacayaal ah.